घर दैलोमा सिहदरवारसँगै भष्टाचार पुग्यो « Lalitpur Khabar
नवराज सिलवाल । ललितपुर १ का प्रतिनिधि सभाका सासंद हुन् । सुरक्षासेवामा प्रहरी नायव निरिक्षक(डिआईजी)सम्म रहेर सेवा गरेका सिलवाल नेकपाको तर्फबाट २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् । ललितपुर गोदावरीमा जन्मेका सिलवालसँग ललितपुरको विभिन्न सन्र्दभ र विकाशका ललितपुर खबरसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
जितेर निर्वाचन क्षेत्र घुम्दा कस्तो लाग्यो ?
ललितपुरको ८० प्रतिशत भु–भाग मेरो निर्वाचन क्षेत्र भित्र छ । त्यो पनि राजधानीकै अति दुर्गम र अविकशित । त्यसबेला सबैतिर जित उल्लास थियो । त्यो क्षण मेरा लागि जिम्मेवारी बोध पनि थियो । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको थियो । गरिवीको रेखामुनि रहेको याहाका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी बाोध भएको थियो ।
काम गर्ने र गराउने(सरकारी सेवार राजनीति¬)बीच कस्तो भिन्नता रहेछ ?
सरकारी सेवामा आफ्नै दायरा हुन्छन् । त्याहा निश्चित जिम्मेवारी पुरा गरे पुग्छ । तर राजनीतिक जीवनभित्र असिमित सम्भावना छ । सधै जनताको बीच रहनुपर्छ । आज सबैं साना ठुला समस्यालाई पनि समाधान समाधान गर्न अघि सर्नुपर्छ । हिजो आदेश दिएर पुग्थ्यो काम हुन्थ्यो । तर आज काम गर्नै पर्छ । जनतामाझ रहेर काम गर्दा सुख अनुभूति हुने रहेछ । पुरै जीवन जनतालाई सर्मपण गर्न चाहन्छु । मैले दिने हो । मैले प्राप्त गर्ने होइन ।
आदेश दिन र आदेश लिन कुन सझिलो ?
हिजो आदेश दिए हुन्थ्यो आज आदेश लिने हो । गाँउका जनता आफ्नो मोवाइल दावेर आफेनो जनप्रतिनिधिले यो गर्नुस मलाई यो चाइयो भनेर आदेश दिने अवस्था छ । यस्तो अवसर पाउदा खुशी लाग्छ ।
ललितपुरको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय विकाशका पुर्वाधार कमजोर देखिन्छ । तर योजना त भ्युटावर बनाउने,मन्दिर बनाउने र रंगशाला बनाउने आए भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
हामीले ल्याएका योजनाहरु जनताकै आवश्यकत्ता हुन् । हाम्रा प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरुमा पहिलो सडक,खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य छन् । आउदो पुस्तालाई संस्कृती र आस्थावान बनाउन सास्कृतिक सम्पदा बनाउनु परेको हो । युवाहरुलाई स्वस्थ्य नैनिकवान् बनाउन खेलकुदको संरचना आवश्यक छन् । यी सबै स्थानीय जनताले नै उपभोग गर्ने हो । पर्यटकीय क्षेत्र विकाशका लागि पर्यटकीय पुर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानी पछि हाम्रा गाँउद्दरमा पर्यटक आउछन् । यसबाट आम्दानी हुन्छ । हाम्रो प्रथमिक सूचिसँगै केही योजना यिनीहरु परेका हुन् ।
मध्यललितपुरको खानी र क्रसरको समस्या जस्ताको तस्तै छन् । बस्तीको बीचमा खानी र क्रसरहरु छन् । जसबाट यहाँका स्थानीयले धुलो धुवा र हिलोजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
लेले नल्लु क्षेत्रमा जसरी अवैध र अव्यवस्थित ढुंगाखानी सञ्चालित ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट सामाजिक प्रभाव पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । वालवालिकाहरु पढ्न छोडेर गिटी कुटिरहेका छन् । खेती योग्य जमिन वातावरण प्रधुषण,खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण भइरहेको छ ।
हामीले निर्वाचनको बेला अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्ने भनेर भनेका थियौं । यही अनुसार काम भइरहेको छ । सरकारले चौघरेमा खानी क्षेत्र छुट्याएको छ । अहिले यहाँ ढुंगा पनि सकिएको छ । अव एक वर्ष भन्दा धेरै समय ढुंगा निकाल्न पनि सकिदैन । अवको ५÷७ महिनामा उहाँहरु सर्नु हुन्छ । उहाँहरु सर्नु भएन भने जनताले आफै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।
मापदण्ड पुरा नभई चलेका क्रसरले स्थानीय सरकारले कर लगाउदा हामीले कर तिरेका छौं भनेर पन्छिने अवस्था आएको छ । के यो ठिक हो ?
जवरजस्ती ढंगले चलेका उद्योगहरुलाई चल्न दिनु हुँदैन । सबैले सरकारले लगाएको नियम पालना गर्नुपर्छ । दर्ता नभएका उद्योग चल्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रशासनलाई भनेका छौं । स्थानीय जनतालाई सास्ती दिएर चलाएका उद्योगहरुले त्याहाका समाजको हितमा खर्च गरेका छैनन् । सामाजिक उतरदायित्व पुरा गरिरहेका छैनन् ।
खानी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन नदिने सरकारी नीति नबनाउदा उद्योगीहरुले काम गरेर खान नपाएको गुनासो छ नि ?
विज्ञ टोलीको सुझाव अनुसार चौघरेका खानी क्षेत्र तोकिएको छ । अर्को ५०÷१०० वर्ष खानी चलाउन सकिन्छ । बस्ती नभएको प्रधुषण नहुने खानी क्षेत्र चलाउदा उद्यमीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । हामीलाई विकाश निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री त चाहिन्छ । उद्योगीहरु पनि विकल्पमा जाने प्रकृयामा छन् ।
हरेक वर्ष सरकारी प्रकृया पुरा गर्दा चैत्र वैशाख लाग्छ । आजकल धमाधम टेण्डरका सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । झरि परिरहेको छ । फेरि पनि असारे विकाश हुने अवस्था आयो त ?
यो गलत परम्परा हो । यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गनर््ुपर्छ । वजेट पास भएर तलसम्म पुग्ने प्रकृया जटिल छ । यसलाई सुधार नगरि हुदैन । तर हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको निर्वाचन क्षेत्र विकाश पुर्वाधारका कामहरु उपभोक्ता समितीलाई दिएका छौं । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । साना बजेटका योजना २÷३ महिनामा पुरा हुन्छन् । ठुला बजेटलाई चाही समस्या छ ।
गाँउ गाँउमा सिंहदरवारसँगै गाँउ गाँउमा भ्रष्टाचार पस्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
यो कुरा सही नै हो जस्तो लाग्छ । हामीले सिहदरवारमा रहेको अधिकार तल ल्यायौं । स्थानीय सरकार बनायौं । परिचालन गर्ने सवालमा समस्या छन् । ३ वटा सरकार छन् । चुस्त दुरुस्त ढंगबाट चल्ने सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका कारण कतिपय काम भएनन् ।
तलको स्थिती कस्तो छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफैं तयार भइसकेको छैनन् । बजेटको दुरुपयोग हुने अवस्था छ । बजेट दुरुपयोग हुने,भष्टाचार प्रोत्साहित हुने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसले संघीयतालाई नै बदनाम हुने अवसता आउँछ । गाँउ गाँउमा सिंहदरवार घर दैलोमा भष्टाचार हुने अवस्था आउन नदिन जनस्तरबाट संचारमाध्यमहरुबाट पनि निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । नत्र नयाँ संविधानले दिएको उपलव्दी नै भताभुङ्ग हुन्छ ।
यहाँको पहलमा ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकाश कार्यक्रमको बजेट पनि उपभोक्ता समितीबाट काम भइरहेको छ । यहाँ भष्टाचार भएछ भने के गर्नु हुन्छ ?
अनुगमन समिती बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितीले पनि अनुगमन समिती बनाएको छ । मैले पनि प्रत्यक्ष हेरिहरेको छु । भष्टाचार नै हुने अवस्था चाही नआउला । जनताकै प्रतिनिधिहरु बसेर काम गर्दा यो समस्या नहोला । फेरि विभिन्न पाटीहरुले पनि यो विषयमा चासो पुर्वक हेरिरहेका छन् । केहि गरी भष्टाचार भएछ भने कारवाही हुन्छ ।
ललितपुरका अरु ठाँउ भन्दा तपाईको क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्नु भयो भन्ने अरु ठाँउका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनिन्छ नि ?
ललितपुरको ८० प्रतिशत भुभाग मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ । जुन गाँउ र विकट पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यहाँको विकाशको परिसूचक हेर्ने हो भने धेरै तल छ । अरु ठाँउ भन्दा विकाशको पुर्वाधारका हिसावले पछि पछाडि छ । समानान्तर विकाश र सामाजिक न्यायका लागि पनि क्षेत्र नं. १ मा बढी बजेट चाहिन्छ । शहर र गाँउको जनजीवनमा धेरै भिन्नता छ । गाँउको जीवनशैली कष्टप्रद छ । यहाँको जनताको माग पनि यहाँको विकाश हो ।
दक्षिणी पहाडी क्षेत्रमा कलकारखाना उद्योगको विकाश भएको पाइदैन । नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर औधोगिक विकाश गर्न सकिन्न ?
यहाँ ठूला उद्योगभन्दा कटेज कारखानाहरु, कृषिमा आधारित उद्योगहरु आवश्यक छन् ।
विश्व कला परिषदले ललितपुरलाई ३५ औं कला शहर घोषणा गरेपछि ललितपुर पाटनमा चैत्र १३ गतेदेखि
स्वस्थानी ब्रत नियमको बैज्ञानिक बिश्लेषण
स्वस्थानी व्रत श्री स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठीन व्रतको पर्व हो । यो पर्व
२५ पुस ०७६,पाँचथर । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा एक किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् । करणीमा संलग्न
श्रमको नयाँ गन्तव्य स्पेन
२५ पुस ०७६, काठमाडौं । नेपाली श्रमको नयाँ र सुरक्षित गन्तव्य स्पेन बन्ने श्रम ,रोजगार
ढोलाहिटी—चापागाँउ उपलव्ध सडक कालोपत्र